Abụ Ọma 69 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ekpere ọbụ abụ kpere ka a napụta ya
“Ihe gbasara ụlọ gị na-anụ m ọkụ n’obi” (9)
“Za m ngwa ngwa” (17)
‘Ha nyere m mmanya gbara ụka’ (21)
Ntụziaka e nyere onye na-eduzi abụ. A ga-eji ụda a na-akpọ “Okooko Lili” kpọọ ya. Abụ Devid. 69 Chineke, biko zọpụta m, n’ihi na mmiri na-achọ iri m.*+ 2 Emikpuola m n’ime apịtị miri emi, nke ala ya na-esighị ike.+ Adakpuola m na mmiri miri emi. Iyi na-asọsi ike eburula m.+ 3 Etigidela m mkpu, ike agwụ m.+ Olu agụọla m. Anya m anaghịzi ahụcha ụzọ ebe m nọ na-echere Chineke m.+ 4 Ndị kpọrọ m asị n’agbanyeghị na e nweghị ihe m mere ha+Dị ọtụtụ karịa ntutu isi m. Ndị chọrọ igbu m,Ya bụ, ndị iro m, bụ́ ndị aghụghọ,* adịla ọtụtụ. Ha manyere m ka m nye ha ihe m na-ezughị ezu. 5 Chineke, ị ma nzuzu m zuzuru,Ị makwa ihe ndị m mere ikpe ji ma m. 6 Ọkaakaa Onyenwe anyị, Jehova nke ụsụụ ndị agha,Biko, ekwela ka ihere mee ndị nwere olileanya n’ebe ị nọ n’ihi m. Biko, Chineke Izrel,Ekwela ka e menye ndị na-achọ gị ihere n’ihi m. 7 A na-akparị m n’ihi gị.+ Ihere ejula m ihu.+ 8 Abụrụla m onye ọbịa n’anya ụmụnne m,Abụkwa m onye mba ọzọ n’anya ndị nne ji mụ na ha.+ 9 Ihe gbasara ụlọ gị na-anụ m ọkụ n’obi.+ Ọ bụ m ka ndị na-akparị gị kparịrị.+ 10 Mgbe m wedara onwe m* ala buo ọnụ,*A kparịrị m. 11 Mgbe m ji ákwà iru uju mere uwe,Ha ji m mere ihe ọchị.* 12 Ndị nọ n’ọnụ ụzọ ámá na-ekwu gbasara m,Ndị aṅụrụma jikwa m agụ egwú. 13 Ma Jehova, biko, ka ekpere mRuo gị ntị n’oge ị ga-emere m amara.+ Chineke, biko, n’ihi ịhụnanya gị* dị ukwuu,Za ekpere m ma gosi na ị bụ onye nzọpụta a tụkwasịrị obi.+ 14 Dọpụta m n’apịtị. Ekwela ka m mikpuo. Napụta m n’aka ndị kpọrọ m asị,Dọpụtakwa m ná mmiri miri emi.+ 15 Ekwela ka idei mmiri na-asọsi ike buru m,+Ma ọ bụ ka mmiri miri emi rie m,Ma ọ bụ ka m dakpuo n’olulu mmiri.*+ 16 Jehova, biko, za m, n’ihi na ịhụnanya gị* dị mma.+ Chee ihu n’ebe m nọ maka na ị na-eme ebere nke ukwuu,+ 17 Ezokwarala ohu gị ihu gị.+ Za m ngwa ngwa n’ihi na m na-ata ahụhụ.+ 18 Bịa m nso napụta m. Napụta m n’aka ndị iro m. 19 Ị ma mkparị a na-akparị m na otú e si na-emenye m ihere nakwa otú e si jiri m na-eme ihe ọchị.+ Ị na-ahụ ndị iro m niile. 20 Obi agbawaala m n’ihi mkparị a na-akparị m, ọnyá ya enweghịkwa ngwọta. M nọ na-atụ anya ka e metere m ebere, ma e nweghị onye meteere m ebere.+ M nọkwa na-atụ anya ndị ga-akasi m obi, ma e nweghị onye m hụrụ.+ 21 Ha nyere m nsí* kama inye m nri,+Ha nyekwara m mmanya gbara ụka ka m ṅụọ mgbe mmiri na-agụ m.+ 22 Ka tebụl ha bụụrụ ha ọnyà,Ka akụnụba ha bụkwaara ha ọnyà.+ 23 Ka anya ha gbaa ọchịchịrị ka ha gharazie ịhụ ụzọ,Meekwa ka úkwù na-ama ha jijiji mgbe niile. 24 Wesa ha oké iwe gị,Wesakwa ha iwe gị dị ọkụ.+ 25 Ka ebe ha mara ụlọikwuu* tọgbọrọ chakoo. Ka a ghara inwe onye bi n’ụlọikwuu ha.+ 26 N’ihi na ha na-achụ onye i tiri ihe ọsọ,Ha na-akọsakwa ahụhụ ndị ị merụrụ ahụ́ na-ata. 27 Mee ka ha taa ahụhụ ihe ọjọọ ha mere taruo ya n’isi,Ka ị gharakwa ile ha anya ka ndị ezi omume. 28 Ka e hichapụ aha ha n’akwụkwọ nke ndụ,*+Ka a gharakwa ide aha ha n’ebe e dere aha ndị ezi omume.+ 29 Ma m na-ata ahụhụ, ahụ́ niile na-egbukwa m mgbu.+ Chineke, biko, jiri ike i ji azọpụta ndị gị chebe m. 30 M ga-abụ abụ too aha Chineke. M ga-aja ya mma, keleekwa ya. 31 Ime otú a ga-amasị Jehova karịa iji oké ehi achụrụ ya àjà,Karịa oké ehi kara aka.+ 32 Ndị dị umeala n’obi ga-ahụ ike Chineke wee ṅụrịa ọṅụ. Unu ndị na-achọ Chineke, ka obi sie unu ike. 33 N’ihi na Jehova na-ege ndị ogbenye ntị,+Ọ gaghịkwa eleghara ndị ya a dọọrọ n’agha anya.+ 34 Ka eluigwe na ụwa too ya.+ Ka oké osimiri na ihe niile na-agagharị n’ime ya too ya. 35 N’ihi na Chineke ga-azọpụta Zayọn+Ma rụghachi obodo dị iche iche dị na Juda. Ha ga-ebikwa n’ebe ahụ, ya* abụrụ nke ha. 36 Ọ bụ ya ka ụmụ ndị ohu ya ga-eketa,+Ndị ji aha ya kpọrọ ihe+ ga-ebikwa na ya.
^ Ma ọ bụ “ndị bụ́ ndị iro m n’enweghị ihe m mere ha.”
^ O nwere ike ịbụ, “Mgbe m bere ákwá ma buo ọnụ.”
^ Na Hibru, “ihe e ji atụ ilu.”
^ Ma ọ bụ “ịhụnanya gị pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “n’olulu.”
^ Ma ọ bụ “ahịhịa na-egbu mmadụ.”
^ Ma ọ bụ “ụlọikwuu ha mgbidi gbara gburugburu.”
^ Ma ọ bụ “n’akwụkwọ nke ndị dị ndụ.”
^ Ya bụ, ala ahụ.